ल क्याम्पसमा १२ हजार विद्यार्थी भर्ना, कहाँ–कसरी पढ्ने/पढाउने ? « News24 : Premium News Channel
ल क्याम्पसमा १२ हजार विद्यार्थी भर्ना, कहाँ–कसरी पढ्ने/पढाउने ?
काठमाडौं । एलएलबी पहिलो बर्षमा अधिकतम् पाँच सय विद्यार्थी पढाउने क्षमता राख्छ, नेपाल ल क्याम्पसले । तर, १२ हजार त भर्ना नै भइसकेका छन् । त्रिभूवन विश्वविद्यालयको अव्यवस्था र विद्यार्थी संगठनको राजनीतिक स्वार्थका कारण जबरजस्त भर्ना गरिएका विद्यार्थीलाई कहाँ, कसरी पढाउने भन्ने समस्याले क्याम्पस प्रशासनलाई पिरोल्न थालेको छ ।
यो काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गमा रहेको नेपाल ल क्याम्पस । जहाँ कानूनमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहको पढाई हुन्छ । पज ः
पूर्वाधार र जनशक्ति हेर्दा यो क्याम्पसले एलएलबी पहिलो बर्षमा बढीमा पाँच सय विद्यार्थी मात्रै पढाउन सक्छ । तर, भर्ना जारी रहँदा अहिल्यै १२ हजार विद्यार्थी भर्ना भइसकेका छन् । क्याम्पसले असोज ५ गतेभित्र रसिद काटेकालाई शनिवारसम्म भर्ना लिइने भनेकाले यो संख्या अझै केही बढ्ने छ ।
त्रिभूवन विश्वविद्यालय मातहत एलएलबी पढाइ हुने अन्य सात क्याम्पसले पहिलो बर्षमा पाँच सयमात्रै विद्यार्थी भर्ना लिन पाउँछन् । तर, नियम विपरित ल क्याम्पसले आठ सयलाई पढाउने भनेर प्रवेश परीक्षा लियो । विद्यार्थी संगठनले कोटा निर्धारणको विरोध गर्दै प्रवेश परीक्षाको उत्तर पुस्तिका नै च्यातिदिए । र, प्रवेश परीक्षा दिने सबैलाई भर्ना लिइने भनियो । यतिले नपुगेर असोज १ बाट कक्षा सुरू भइसकेपछि विद्यार्थी संगठनको दबाबमा क्याम्पसले पुनः सूचना निकालेर भर्ना खोल्यो । कानून पढ्ने क्याम्पसमै कानून मिचेर गरिएको यो भर्नाले विद्यार्थी मारमा परेका छन् । क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी चाप भएपछि नियमित कक्षा भएको छैन ।
यसपालि एलएलबी भर्ना भएका विद्यार्थीको संख्या गत वर्षको दाँजोमा तेब्बर हो । गत वर्ष ४ हजार २ सय ३८ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । अहिलेसम्म भर्ना भएकामध्ये दस प्रतिशत मात्रै विद्यार्थी पढ्न आए पनि क्याम्पसको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधारले धान्दैन । एलएलबी पढाइने तीनदेखि पाँचवटा कक्षामा १२ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी त्यो पनि ५२ प्राध्यापकले कसरी पठाउन सक्छन् ?
जुनसुकै विषयमा स्नातक गरेकाले एलएलबी पढ्न पाउने भएकाले कानून अध्ययनमा आकर्षण छ । भविष्यमा जनप्रतिनिधि बन्ने चाहना, न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायको कार्यालय प्रमुख हुन तीन महिना कानूनसम्बन्धी तालिम लिएको वा कानूनमा स्नातक गरेको हुनुपर्ने सर्तका कारण पनि आकर्षण बढिरहेको हो । बढ्दो आकर्षणमा विद्यार्थी संगठनको राजनीतिक स्वार्थ मिसिँदा बढेको ल क्याम्पस झनै भद्रगोल बनेको छ ।